Beauquartier Madeleine - Le Beau 3 chambres 11 - I-Airbnb
Beauquartier Madeleine - Le Beau 3 chambres 11
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Beauquartier
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Beauquartier izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ifulethi elihle elilungiswe ngokuphelele le-80sqm elisendaweni yokuqala (enekheshi) lesakhiwo sendabuko nesivikelekile saseHaussmannien.
Ifulethi lilungele izithandani ezi-3, umndeni noma iqembu labangane njengoba linendawo evulekile ekhululekile ehambisana nendawo yokudlela (+/- 6 pers) kanye nekhishi elihlome ngokuphelele.
Nakhu ongakuthola kule ndawo:
Amakamelo okulala angu-x3 anemibhede engusayizi we-Queen (160x200), amagumbi okugeza ayi-en-suite kanye ne-TV
x2 indlu yangasese ehlukene
Ifulethi lihlome ngokuphelele (i-Wifi, i-TV, umshini wokuwasha, umshini wokuwasha izitsha ...) kanye nelineni kunikezwa. I-air conditioning iyatholakala endaweni yegumbi lokuphumula kanye nakuwo wonke amagumbi okulala.
Lapho ufika, yonke into izobe isilungele ukukwamukela ezimweni ezinhle kakhulu: ilineni lombhede, amathawula, imikhiqizo yokugeza, ikhofi kanye netiye. Ngaphezu kwalokho uhlelo lwethu lokukhiya okuhlakaniphile luzokuvumela ukuthi ungene ngokuzenzakalelayo ngemva kuka-3pm nokuhlala ngaphandle kokhiye.
Njengoba wonke amafulethi ethu engabhemi ukwephulwa kwalo mthetho kuzosiphoqa ukuthi senze ukuhlanza okukhethekile efulethini ngakho u-50% wediphozithi yakho yomonakalo uzodonswa.
Ngaphambi kokuba ibe le ndawo ephakeme lapho imikhiqizo yokunethezeka ingomakhelwane bonke, i-rue Royale yayiyindawo yokuhlala. Eduze nje, kunendawo yokudlela edumile kaMaxim ene-facade yayo ye-Art Nouveau, kodwa futhi ingesinye sezitolo zokuqala zaseLadurée, esasungulwa ngo-1862.
Phakathi kwe-Place de la Concorde kanye ne-Place de la Madeleine, ku-No. 25 rue Royale yi-Cité Berryer, eyaziwa nangokuthi i-Royal Village. Lo mzila okhangayo wabahamba ngezinyawo uwumbukiso we-Parisian chic par excellence. Ezimpambanweni zemigwaqo kukhona i-rue Saint-Honoré edumile.
Ukuqhubeka kancane, kukhona i-Place de la Madeleine edume ngokugxila ezitolo zokudla eziphambili nezikhethekile kanye namathiyetha amaningi ahlonishwayo nezinye izindawo zemibukiso ezidumile njenge-Olympia noma i-Théâtre Edouard VII.
Siyatholakala 24/7 ukuphendula yonke imibuzo yakho futhi sikusize ngesikhathi sokuhlala kwakho!
Sisebenzisa izikhiya ezihlakaniphile ukuze sizihlole! Ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokufika kwakho uzothola yonke imiyalelo kanye nekhodi yakho siqu ukuze ufinyelele efulethini lakho!
Sikhethe isistimu yokuzihlola ukuze inikeze izivakashi zethu konke ukuguquguquka ezikudingayo.
Sisebenzisa izikhiya ezihlakaniphile ukuze sizihlole! Ezinsukwini ezimbalwa nga…
Inombolo yepholisi: 7510804190562
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R16789.